I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Arla B
Lena indawo esanda kulungiswa kabusha yomamezala engaphansi elisohlangothini lolwandle lwe-Hwy 98 emaphethelweni aseNtshonalanga e-Mexico Beach. Iyunithi inekamelo lokulala eli-1 elinombhede wendlovukazi, igumbi lokugezela eli-1, namabhinki amabili akhiwe. Iphinde ibe nekhishi elincane elivulekele indawo yokuhlala. Igceke elingemuva kwekhaya liyindawo enhle yokuzijabulisa. Kukhona indawo yokushisa igesi, itafula, isambulela, nezihlalo zokuphumula ukuze ujabulele. Izikhala zangaphandle zabiwe nami, kodwa awuvamisile ukungibona ezansi lapho.
Azikho izilwane ezifuywayo, ngicela. Indawo yokubhukuda engumakhelwane isendaweni yangasese, futhi ayisetshenziselwa izivakashi. Kodwa-ke, ulwandle lucishe lube ngamayadi ayi-100 ukusuka emnyango wakho neGulf of Mexico elinde ukuthi ungene emanzini. Abekho abaqaphi abasemsebenzini!
I-Mexico Beach izoba senqubweni yokwakha kabusha iminyaka ezayo, kodwa amabhizinisi ethu amaningi asebuyile. I-Caribbean Coffee kanye ne-Rustic Sands campground avulekele ukudla kwasekuseni. I-Killer Seafood isebenza ngokugcwele endaweni yayo yangempela ngeloli elisha elimangalisayo lokudla, kanye nezihlalo zangaphandle ezimboziwe. IMango Marleys isivulwe kabusha. Amaloli amaningi okudla e-Mexico Beach ahlinzeka ngokudla okumangalisayo. Izindawo zokudlela nezitolo zasePort St Joe zonke zivuliwe ngaphandle kwalezo ebezingaphambi kolwandle. Indawo edayisa utshwala negilosa ivuliwe ku-15th Street.
Amashadi okudoba atholakala kabanzi, futhi kunezindawo eziningi ezikhangayo zohambo losuku ngaphakathi kwedrayivu emfushane.
Ibungazwe ngu-Arla B
Izivakashi eziningi zizobe zingena nami ngqo, futhi ngizobe ngisemagcekeni isikhathi esiningi.
Isimo se-Superhost sibaluleke kakhulu kubasingathi be-airbnb. Uma uthola noma yini okushodayo, ngicela ungithinte mathupha. Ngizokwenza yonke imizamo ukulungisa noma iyiphi inkinga.
Isimo se-Superhost sibaluleke kakhulu kubasingathi be-airbnb. Uma uthola noma yi…
UArla B Ungumbungazi ovelele